Imfashini nokuThengisa - I-Easy Multi DIsplay - I-Digital Signage Software
Izembatho, imfashini, ubucwebe, izitolo zezipho nokuningi.
Bandakanya, jabulisa futhi ukhuphule isisekelo sekhasimende lakho ...
Noma ngabe unendawo yezitolo zemfashini noma ibhizinisi elikhulukazi, i-Easy Multi Display ingakusiza ekuboniseni ibhizinisi lakho lemfashini nemikhiqizo yakho, futhi ilisize ligqame esixukwini.
BONISA IMikhiqizo YAKHO
Nikeza izivakashi zakho ukubuka okubukwayo kokuqukethwe. bonisa izinto zakho ezithengisa kakhulu, noma imikhiqizo yakho emisha.
VIVELA Amakhasimende akho
Faka abathengi ukungena esitolo sakho ngemibukiso yokubuka ethokozisayo. Nikeza abadlulayo ngokunambitha kokutholwayo.
Ukuqalisa iphromoshini noma ukuthengisa kwesizini? Bandakanya abathengi bakho abangahle abanikeze ngokukhethekile namadili ngaphambi kokuthi bangene esitolo sakho.